आइसोलेसनको ‘पौष्टिक आहार’ चटपटे र चाउचाउ – Health Post Nepal
२०७७ जेठ १३ गते १८:०९
बाँकेका आइसोलेसनमा रहेका ४२ कोरोना संक्रमितको अवस्था गम्भीर
काठमाडौं यी ठाउँमा बन्दैछन् आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन
कोरोना भाइरसकाे सं‌क्रमण पुष्टि भइसकेपछि संक्रमितलाई आइसोलेसन कक्षमा उपचारका लागि भर्ना गरिन्छ। संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकालाई कोरोना भाइरस संक्रमण हुने बढी सम्भावना देखिएको हालसम्मको अनुसन्धानले देखाएको छ।
सम्भवतः यही कारण संक्रमण पुष्टि भइसकेकाको प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न आइसोलेसनमा राखेर पौष्टिक खाना दिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सुझाव दिएको छ।
तर, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितहरूलाई चपपटे, चाउचाउ, मुरी, छोलालगायतका खानेकुरा दिइने गरिएको छ।
संक्रमण भएर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनमा रहेका एकजनाले पौष्टिक आहारको नाममा चटपटे, मुरी, चाउचाउ खानुपरेको बताए। प्रादेशिक अस्पतालले आइसोलेसनमा रहेकाहरूलाई पौष्टिक खाना दिनतर्फ खासै ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सोमबार नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जको आइसोलेसनमा रहेकाहरूलाई खानाको व्यवस्था गर्न २५ लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका छन्। यसका साथै कोरोनाकै लागि प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ८७ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ।
नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएको सबै ४३ जना सोमबारै डिस्चार्ज भइसकेका छन्। यसका साथै वीरगन्जमा सानो पाइला नामक संस्थाले आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूलाई दैनिक खाजा र खानाको व्यवस्था गरेको छ।
‘उहाँहरूलाई दिनको दुईपटक खाजा र दुईपटक खाना दिने गरेका छौं,’ पण्डितले भने,‘खनामा विशेष ध्यान दिइएको छ, अस्पतालको आफ्नै भान्सामा पकाइन्छ। हामी चिकित्सकहरू पनि त्यही खाने गरेका छौं।’
सानोपाइला नामक संस्थाले नारायणी अस्पतालमा खानाको व्यवस्था गरिरहँदा प्रदेश सरकारले अन्य स्थानको आइसोलेसन व्यवस्थित गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनमा रहेका ती बिरामीको भनाइ छ। ‘कोरोनाबाट मुक्त हुन शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने भनिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँको खानाले झनै बिरामी त हुने होइन चिन्ता थपिएको छ।’
आइसोलेसनमा रहेकालाई दिउँसोको खाजा पनि पोलिइथिनकै झोलामा बाँडिने गरिएको छ। ‘न चम्चा दिइन्छ, न प्लेट, प्लास्टिकको झोलामा खाजा दिइन्छ,’ उनले भने, ‘प्लास्टिकको प्रयोग त्यतिकै पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन, कमसेकम पेपरको प्लेटमा खाजा दिए हुन्थ्यो।’
यता, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका कोरोना संयोजक डा. कुलदीप पण्डित खाना र खाजाको गुणस्तरबारे लगाइएको सम्पूर्ण आरोप निराधार रहेको दाबी गर्छन्। सरकारले निर्धाण गरेको मापदण्डअनुसार आइसोलेसनका बिरामीहरूलाई पौष्टिक खाना र खाजा दिने गरिएको उनले बताए।
चटपटे कस्तो पौष्टिक आहार हो भन्ने जिज्ञासामा डा. पण्डितले ‘चटपटे, मुरी, छोला, चाउचाउ सँधै दिइन्न, कहिलेकाही‌ मात्रै दिने गरिएको’ बताए। ‘उहाँहरूलाई दिनको दुईपटक खाजा र दुईपटक खाना दिने गरेका छौं,’ पण्डितले भने,‘खनामा विशेष ध्यान दिइएको छ, अस्पतालको आफ्नै भान्सामा पकाइन्छ। हामी चिकित्सकहरू पनि त्यही‌ खाने गरेका छौं।’
खाना र खाजामा दूध, अण्डा, फलफूल, तरकारी, सागलगायतका पोष्टिक कुराहरू दिइने गरिएको उनले बताए। आइसोलेसनमा रहेकाहरूको खाना र खाजामा त्रुटी देखाउन उनले चुनौती दिए।
सुरुमा खानेपानीको समस्या देखिएपछि स्थानीय केही युवाहरूले मिनरल वाटर, फलफूललगायतका सामग्री आइसोलसनमा रहेकाहरूलाई पुर्याएका थिए। तातो पानीको व्यवस्था नरहेको गुनासो बढेपछि आइसोलेसनमा पानी तताउन इलेक्ट्रिक किट्लीकाे व्यवस्था गरिएको थियो।
प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा अहिले कोरोना पोजिटिभ देखिएका २९ जना अहिले भर्ना छन्।
Tags: आइसोलेसन, पौष्टिक आहार, पौष्टिकतत्व